Howgalo lagu qabtay dad badan
26 Dec 26, 2012 - 6:31:59 AM
Howlgalo lagu qabqabatay kooxo hubeysan oo dhibaatooyin ku haya shacabka ayay maanta 26 December,2012 Booliiska DF iyo kuwa AMISOM ka sameeyeen degmada Xamarweyne, iyadoo howlgalkaas lagu qabqabtay in ka badan 24 ruux oo qaarkood watay dharka Booliiska.
Booliiska iyo DF iyo kuwa AMISOM ayaa waxay tageen dhowr goobood oo ay kooxahan ku sugnaayeen, waxaana dadkii ay qabqabteen ay ku xireen xabsiga bartamaha Xamar oo ku yaala Degmada Xamarweyne.
"Waan soo dhaweynaynaa howgalkan waayo kooxaha la qabtay waa kuwo dhib ku haya shacabka" ayay tiri Haweeney ganacsi ku haysata goobaha laga sameeyay howgalka oo ahayd Bacadlihii hore ee Xamarweyne.
Goobjoogayaal kale ayaa sheegay inay soo buuxsameen saakay agagaarka halka uu ka ka dhacay howgalka gaadiid ay wateen Booliiska AMISOM, kuwaasoo markiiba qabtay dhowr dhalinyaro ah oo hubeysnaa, kuwaasoo lacago aan sharci ahayn ka qaadanayay Boosteejo ay ka rartaan gaadiidka dadweynaha oo halkaas ku taalay.
"Aad baan u soo dhaweynaynaa howgalka waayo waa mid looga horjeedo kooxo lacago baad ka qaata gaadiidka iyo goobaha ganacsiga, ma garanayno meel ay ka socdaan dhowr jeer ayaana ka dacwoonay" ayuu yiri Ganacsade Dukaan ku leh Dhabarka dambe ee Afar Irdoonka Xamarweyne.
Ma jirin wax iskahorimaad ah oo dhacay intii uu howgalku socday, iyadoo howlgalka kadib ay ganacsiga iyo isku socodka gadiidka iyo dadku ay dib u bilowdeen, iyadoo howgalka kadib lagu arkayay goobta dadweyne fara badan oo ku xoomay.